Kungenzeka ukuthi iNkantolo YoMthethosisekelo isiginqelwe kwelikaZuma - Bayede News
Kwake kwakhona isikhathi lapho uma kuphuma isitatimende esikhulumna ngesinqumo seNkantolo YoMthethosisekelo bese kuba khona ukuphakamiswa kwamehlo. Lokhu bekwenziwa phakathi kokunye wukulangazalela kwabantu ukuzwa isinqumo leso. Lokhu bekwengezeka kakhulu uma kukhulunywa ngowayenguMengameli uZuma. Nokho ngenxa yezigameko ezahlukene ngezinkantolo kanye naye uZuma qobo lo muzwa ubukeka wehla kwabanye.
Izolo iNkantolo YoMthethosisekelo imemezele ukuthi namhlanje mhla zili-17 kuMandulo izokwethula isinqumo odabeni oluthinta uZuma. Lolu daba luthinta isicelo sakhe uZuma sokuba iNkantolo izinuke amakhwapha ekutheni kungenzeke yini ukuthi yenze iphutha ngesikhathi imphosa endaweni emnyama izinyanga ezili-15. Kulokhu uZuma uthi wahlinzelwa ezibini ngoba uphoswa endaweni emnyama nje akakaze avele enkantolo nokuyinqubo ukuthi onecala unelungelo lokuziphungela enkantolo.
Okubukeka kuwumbuzo kubantu wukuthi engabe noma ngabe isinqumo sithini kuzot ini lokho kuZuma kwazise uvele usengaphandle njengesiphakamiso nesinqumo soMnyango Wokuhlunyeleliswa Kwezimilo.
Lo Mnyango ngoMphathi wawo uMnu uFraiser nokusolwa ukuthi uxoxe noMengameli wezwe uRamaphosa bathe uZuma katokele ngasekhaya bekhomba impilo entekenteke. Ngamafuphi uma ithi iNkantolo yenze iphutha akusamsizi ngoba usevele ungaphandle angeke akhishwe
yiyo noma isinqumo sayo. Kanti uma ithi ayenzanga phutha angeke ithi ngakho kabuyele ezikhindini.
Ngokolimi lwezomthetho kungenzeka ukuthi isinqumo sakusasa siwukwenza nje ngoba aBehluleli beNkantolo YoMthethosisekelo sebaginqelwa nguFraiser noRamaphosa.
Nokho ngakolunye uhlangothi injolozela izobe isekutheni kambe aBehluleli bangaphoxeka yini, lapho bezinuka amakhwapha. Khona uma kunjalo yona iNkantolo iyophinde yini ihlonipheke nokuthi bona bayoba yiliphi ngomuso. Konke lokhu kuyocaca namhlanje.
nguZakhele Nyuswa Sep 17, 2021